Oduu olmaa Oromiyaa alaa fi keessaa – Hagayya 15, 2017 – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu olmaa Oromiyaa alaa fi keessaa – Hagayya 15, 2017
Oduu olmaa Oromiyaa alaa fi keessaa – Hagayya 15, 2017
Hawaasa keenya Awuroppaa jirtaniif; Wayyaaneen hawaasni Oromoo Awuroppaa lakkoofsa namaatifi cimina jaarmayaatinis jabaachuu waan hubatteef xiyyeeffannaa cimaa gootee socho’aa jirti. Ji’oota sagalan darbe kana qofa qondaaloonni OPDO marroo 15 ol dhoksaan Awuroppaa dhufanii shira xaxaa turanii galuun beekamee jira. Amma ammoo ambaassadaroota Oromoo lama Awuroppaatti ramaddee jirti ( Margaa Baqaanaa- Sweden, Ewunatuu Bilaattaa- Belgium). Kumaa Dammaqsaa ammaaf achuma Berlin akka turu murtaayera jedhu. Akeekni isaanii guddaan hawaasa keessatti diiggumsa uumuudha. Kanaaf ummanni keenya achi jirtan dammaqinaan ergama jara kanbaa fashalsuu irratti hojjachuu qabdan.
Oduu walqabateen Girmaa Biruu kan waggota muraasa dabraniif washington DC keessatti Oromoo irratti shira xaxaa ture Wayyaaneen alanshitee tuftee jirti. Bakka isaa Kaasaa Taklabirhaantu ramadame. Asteer Maammoo tan warraaqsi ummata tufe gara Ottawa, Canada ergamuun bakka Burtukan Ayyaanoo akka buutu ergamtee jirti ( Hawaasni Ottawa fi Toronto cimaa waan ta’eef homaa hin fiddu). Via Jawar Mohammed
“Godina Addaa Oromiyaa Nannawaa finfinnee Magalaa
Sulultaa keessaatti Namootni sadii(3) Aduu guyyaa 5/12/2009 Akka lakkoofsa warra Habashatti Sababa hin beekamneen mana hidhaa Magalaa sulultaa keessatti dararamaa jiru,akka dubbicha itti dhiheenyaan hordofnetti Shakkii Tarii Uummataa kakasuuf jedhuun yaa shakkamaan malee,Rakkoo nama dhunfaan ta’uun isaa hubatamee jira.Dhaddachaa Guyyaa kalessaa jechuuniis aduu guyyaa 8/12/2009 oleen Abbaan seeraa (perezedantiin) mana murtii Aanaa magaalaa sulultaa kan ta’ee kitilayyoon Wayyaanee Obboo Dassaleenyii Dabaloo Dibabaa kan jedhamu Bellamaa guyyaa 14(torbee lama) irratti gafatee jira dhimmichi sobaa ta’uu namootni dhimmichaa of harkaa qabaan hunduu ni beeku qorataa poolisii dhimmicha of harkaa qabu yeroof maqaa kan hin arganne waan ta’eef dhimmicha hordofnee yeroo gababaa kessatti isiin beeksiifna.
Namootni kuniis maqaan isaanii akka armaan gadii kanatti taa.
1. Asaffaa shumii
2. Waqeee Badhanee
3. Sisaay Darrasaa
4. Asheetuu Mammoo
Asumaan perezedantiin kun armaan duraas injollee Oromoo qerroo meeqaa irratti shira dalagaa kan turee waan ta’eef akka irraa of eeguu gamanumaa isiin beeksiifna.” Via Jawar Mohammed
Arsii Lixaatti maanguddoon waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan
Yeroo baay’ee namni tokko erga dhalatee umrii dargaggummaa keessatti gaa’ila kan raawwatu.
Darbee darbee ammoo sababa haala jireenyaa garagaraatin umrii maanguddummaa keessatti gaa’ila raawwachuun ni mul’ata.
Wanti tibbana ta’e tokko ammoo edaa kunis ni jiraa kan nama jechisiisu.
Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti maanguddoon waggaa 107 guyyaa kaleessaa gaa’ila isaanii raawwataniiru.
Haaji Abdulqaadir Dheekkamaa Diidoo jedhaman. Aanaa Shaashamannee ganda Daannisaatti bara 1902 dhalatan.
Barnoota amantaa irra erga turanii booda bara 1942tti haadha warraa isaanii tan jalqabaatiin walitti worrooman.
Haadha warraa isaanii sana wajjiinis ijoollee 9 argachuun jiraataa turan.
Bara 1956tti ammoo haadha warraa lammaffaa fuudhanii jireenya isaanii itti fufan.
Haaji Abdulqaadir haadha warraa isaanii lameen irraa ijjoollee hedduu kan argatan ta’anis yeroo ammaa lubbuudhaan kan jiran dhiira 9 fi dubartoota 10.
Ilmi isaanii kan jalqabaa yeroo ammaa waggaa 60.
Maatii isaanii fi kan ilmaan ilmaan isaanii dabalatee yeroo ammaa kan jiran nama 108.
Haatii warraa Haaji Abdulqaadir tan lammataa du’aan jalaa boqachuu fi tan jalqabaa maanguddummaadhan jalaa dadhabanii kunuunsa dhabuu himan.
Rakkoo fi fedhii fuudhaaf qaban irraa ka’uun haadha warraa sadaffaa akka fuudhuu qaban baasanii buusanii murtee irra ga’an.
Maatii isaanii wajjinis mari’atanii walii galan.
Sanarraa ka’uun haala sirna aadaa fuudhaa fi heerumaatin jaarsa baasanii ergachuudhan kadhatanii Hagayya 07,2009 umrii isaanii waggaa 107ffaatti maatii fi firoottan akkasumas hiriyoota isaanii wajjiin ta’uun shamarree Furoo Guyyee jedhamtu waggaa 33 taatu waliin gaa’ila isaanii raawwataniiru.
Haji Abdulqaadir umrii kanatti gaa’ila raawwachuu isaaniitti gammachuu qaban ibsuudhan, haadha warraa 3ffaa tana haala addaatin kan ilaalan ta’uu fi akka umriin adda fagaatan osoo hin taane akkuma nama kamiittuu akka jiraatuu barbaadan dubbatan.
Yoo Rabbi irraa taates ilmoo walirraas ni arganna jedhan.
Kana malees jaalalaa fi gammachuudhan ishee wajjiin jiraachuu akka barbaadanis himaniiru. Via Yeeyyis Birruu Nagaroo
#QabsooOromoo-Tuffii TPLF Oromoof qabdu mee ilaalaa!
Namoonni keenyaa maqaa siyaasaan hidhaman hundi haa hiikamani otoo jechaa jirruu, isaan kunoo ,dabalanii hidhaa jiru.
Dabare Dabareen hunda hidhuuf jiru.
Amboo ti ilmaan oromoo mormii daran cimaa jiru kana hisntu kakkaase jechuun hidhuu itti fufani jiru.
Guyyaa Wiixata kaleessaa 8/12/2009 naamoota kana gara Adaamaatti Bus lama konkoolaata sivil service Oromiyaa Fifinnee irraa Amboo fidaanii fuudhani deeman.
Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtani hundaaf !
Mormiin sochii oromoo sadarkaa amma irra jiru
1. Hidhamtoonni siyaasaa oromoo hundi haa hiikamani jechaa jira,
Garuu TPLF faall’aa kanaa
-itti fufee tuffiidhaan itti dabalanii haaraa itti fufanii hidhaa jiru.
Maal fidduu kunoo dabare dabareen itti fufinnee hunda hiina jechaa jiru.
Kun maal jechuudhaa ?
Qeerroo fi ummanni maali fallii kanaa jettu ???????
Teenyee Lafa irra dhumuu moo qabsoo oromoo miliona 50 hirmaachiseen ni hinjiffanna; ni dandeenya ! Jechuun irratti Tokkummaan guutuu Oromiyaatti hirmaachuu qabna!
Qabsoon bifa qinda’een guutuu Oromiyaatti itti fufa! Via Dhábasá Wakjira Gemelal
Tufaa Wadaajoo – ‘GADOO JAALALAA’ – Afaan Oromoo video music – 2017
SQ: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Hagayya 15, 2017